आफ्नै बहिनीलाई गर्भ बोकाउने यौन पिपासु दाईको ‘पाप धुरीबाट’ कराएपछि.. — sancharkendra.com
आफ्नै बहिनीलाई गर्भ बोकाउने यौन पिपासु दाईको ‘पाप धुरीबाट’ कराएपछि..
यौन पिपासुहरुले के रगतको साइनो पनि मान्दैनन रु समाज नराम्ररी विछृंखलित बन्दै जाँदा राजधानी काठमाडौंमा नै एउटा पाशविक घटना सार्वजनिक भएको छ । लेख्न पनि हात धर्मराउने , पढ्न पनि आँशु चुहाउनु पर्ने घटनाले समाज र परिवारको साइनो कसरी चुँडिदैछ भने कहालीलाई उजागर गरेको छ ।
बुधवार राति ११ बजेतिर पेटमा असह्य पीडा भएको बताएपछि १५ बर्षीया किशोरी निशा ९नाम परिवर्तन ०लाई आफन्तले पिपुल्स अस्पताल लगे । चिकित्सकले जांच गर्दै गर्दा उनी पिसाब लागेको भन्दै अस्पताल गइन् शौचालयबाट फर्कँदा उनको लुगामा रगत देखेपछि ड्यूटीमा रहेका चिकित्सकले पुनः जांच गरे र उनी गर्भवती रहेको थाहा पाए । उनी गर्भवती रहेको कुरा त्यतिबेला सम्म निशा र उनका आफन्तले अस्वीकार गरे ।
निशाले १ दशमलब ३ केजीको मृत शिशु ९छोरी० जन्माइन् । अस्पतालमा संगै आएका दाइले गाउँ जाँदा कक्षा ६ मा पढ्दादेखि नै ९१२ वर्ष० देखि नै बलात्कार गर्दै आएको बताइन । आमाबुबा नभएको बेलामा दाई आएर कोठामै बलात्कार गर्ने गरेको पीडा पनि उनले ओकलिन । शिशु किन मृत जन्मियो भन्ने विषयमा चिकित्सकले कि त आमाको उमेर नपुग्दा वा कुनै औषधि खुवाइएको कारण मृत्यु भएको हुनसक्ने जानकारी दिएका छन् ।
किशोरीले आफु दाइ नाता पर्नेबाटै बलात्कृतभएको चिकित्सकलाई बताएपछि चिकित्सकहरुले सोह्रखुट्टे प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका डिएसपी गौतमकुमार केसीले अभियुक्त पक्राउ परिसकेको र अन्य अनुसन्धान जारी रहेको जानकरी दिए
यौन सपना देख्नुको रहस्य केहो ? जानिराख्नुहोस् बेलैमा
राजाधानीमै यस्तो: यौनसम्पर्क गर्ने बेला श्रीमानको जिब्रो टोकिदा श्रीमती जेल, यस्तो भन्छ प्रहरी
एजेन्सी । हामीलाई लाग्छ, मृत्यु अवश्यंभावी कुरा हो र मानिसको मृत्यु जुन कुनै समयमा पनि...
काठमाडौं । आज हरिबोधिनी एकादशी । भगवान् विष्णुको प्रतीकका रुपमा तुलसीको विवाह र विशेष पूजा...
शहरमा मर्निङवाक खतरापूर्ण, वीर अस्पतालका डा. पौडेलले दिए यस्तो सुझाव
काठमाडौँ । सहरका सडक छेउछाउ मर्निङ वाक गर्दै हुनुहुन्छ रु त्यसो हो भने ख्याल गर्नुहोस्...
बनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई गृहजिल्ला बासिले हाने यस्तो झापड
जाजरकोट । छ महिनापछि गृह जिल्ला जाजरकोट पुगेका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सरम...
मिराज होटलको कोठा नम्बर ५०२: मारवाडी व्यापारीकाे यस्ताे हर्कत, प्रहरी नै चकित
काठमाडौं । काठमाडौंको बत्तीसपुतलीको मिराज होटल लर्डस् इनमा जुवा खेलिरहेका १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ...
बिहेको कुरा छिन्न सुटुक्क अमेरिका पुगे मुख्यमन्त्री राई, को हुन् दुलही ?
अर्कै रहेछ केशव स्थापितलाई मन्त्रीबाट हटाइनुको कारण, थाहा पाएपछि छक्क पर्नुहुनेछ
कञ्चनपुरमा ओली-प्रचण्डलाई धक्कै धक्का ! नेता कार्यकर्ता भकाभक नेकपामा प्रवेश गर्दै
दुई मन्त्रीसहित माधव नेपाल सवार सेनाको हेलिकप्टर २ घण्टा आकाशमा किन घुम्यो ? कारणसहित
चितवनबाट हराएका सुदिप तेह्रथुममा भेटिए, यस्तो अनौठो छ बेपत्ता हुनुको कारण
ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि खुसीको खबर, प्रचण्डले गरे यस्तो घोषणा
धनगढीमा युवकको विभत्स हत्या, रक्ताम्य शव घिसार्दै गर्दा पक्राउ परे आशिष र दीपेन्द्र